नेपालमा कोरोना संक्रमणको दैनिक नयाँ रेकर्ड, २४ घन्टामै थपिए ७२११ संक्रमित - A complete Nepali news portal based on news & views
१९ बैशाख २०७८, आईतवार १९:५३ May 2, 2021 Nonstop Khabar
काठमाडौं । आइतबार पछिल्लो २४ घण्टामा १७ हजार ७७० नमुना परीक्षण गर्दा ७ हजार २११ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता संक्रमितको संख्या १३६.८ प्रतिशत बढेको छ । प्रदेशगत रुपमा लुम्बिनीमा २३३ र कर्णालीमा २१६ प्रतिशतले संक्रमितको संख्या बढेको छ । ‘यसले विश्वमा एकदमै चाँडो संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको देशहरुमा नेपाल पनि पर्छ भन्ने देखाउँछ’ धुलिखेल अस्पतालको जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग निर्देशक डा. विराजमान कर्मचार्यले बताए ।
पोजेटिभिटी रेसियो अर्थात परीक्षण गरिएकाहरुको अनुपातमा संक्रमित ३७ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा ६७.९ र लुम्बिनीमा ६१.३ प्रतिशत छ । जबकी पोजेटिभिटी रेसियो ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । डा. कर्मचार्य भन्छन्, ‘अहिले संक्रमितको संख्या जति देखिएको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा संक्रमितहरु, जसको पीसीआर गरिएको छैन, समुदायमा छन् ।’
फैलिने दर पनि लुम्बिनी र कर्णालीमा नै धरै छ । लुम्बिनीमा २.९ र कर्णालीमा २.४ प्रतिशत छ ।
यस्तै काठमाडौंमा २ हजार ७०४ , ललितपुरमा ५५० , रुपन्देहीमा ४६६, बाँकेमा ४०६, भक्तपुर ३०१, मोरङमा २४९, कैलालीमा २३२, धनुषामा २२८ जना कोरोना संक्रमण थपिएका छन् ।
यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ४८ हजार ७११ पुगेको छ । जसमध्ये तीन हजार ५३० जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । ४५ हजार १८१ जना होम आइसोलेसनमा रहेको छ । उपचाररत संक्रमितमध्ये ४७७ जना आईसीयूमा छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप २७ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै मृतकको संख्या ३३३५ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १६१२ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएका छन् । यससँगै संक्रमितमुक्त हुनेहरुको संख्या २ लाख ८३ हजार ९९४ पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने तैयारी